Saynisyahankii ugu sarreeyay Iran ee nukliyeerka oo la toogtay - Home somali news leader
Home NEWS Saynisyahankii ugu sarreeyay Iran ee nukliyeerka oo la toogtay
Saynisyahankii ugu sarreeyay Iran ee nukliyeerka oo la toogtay
Saynisyahan u dhashay Iran oo ku xeel dheer cilmiga nukliyeerka oo lagu tilmaamay inuu yahay Abaha barnaamijka Nukliyeerka Iran ayaa lagu toogtay wadada magaalada u dhow Tehran.
Mohsen Fakhrizadeh ayaa weerar gaadmo ah lagu qaaday magaalada Absard oo 70km dhanka bari ka xigta magaalada Tehran. Afar nin oo weerarka soo qaaday ayaa rasaas furay kadib markii ay goobjoogayaashu maqleen qarax. Dadaalo lagu doonayay in lagu soo nooleeyo Fakhrizadeh ayaa fashilmay, sidoo kale ilaaladiisa ayaa sidoo kale la dhaawacay.
Lataliyaha hogaamiyaha sare ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa wacad ku maray in wadanku ka aargudan doono kuwii ka dambeeyay. Abaanduulaha militariga Hossein Dehghan ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray “Waxaan u garaaceynaa gacan ku dhiigle yaashii shahiidkan la dulmay oo aan ka qoomameyn doono ficilkooda.”
Wasaaradda difaaca ee Iiraan ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay geerida Fakhrizadeh. “Intii uu socday iska horimaadkii u dhaxeeyay kooxdiisii ​​amniga iyo argagixisada, Mohsen Fakhrizadeh waxaa soo gaaray dhaawac culus waxaana loo qaaday isbitaalka,” ayaa lagu yiri warbixinta. Nasiib darrose, kooxda caafimaadku kuma guuleysan inay soo nooleeyaan, daqiiqado ka horna, maareeyahaan iyo saynisyahankan, sannado dadaal iyo halgan kadib, wuxuu gaaray shahaado heer sare ah. ”
Wasiirka arrimaha dibedda Iran Mohammad Javad Zarif ayaa isla markiiba u aqoonsaday Israa’iil inay tahay dambiilaha ay u badan tahay. “Argagixisadu waxay dileen saynisyahan caan ah oo reer Iran ah maanta,” ayuu ku soo qoray Twitter. Fulaynimadan – oo leh calaamado halis ah oo ku saabsan doorka Israa’iil – waxay muujineysaa isku duubni la’aanta dambilayaasha. Iran waxay ugu baaqeysaa bulshada caalamka – iyo gaar ahaan EU-da inay joojiyaan laxjecleysiga ee ceebta ah ayna cambaareeyaan ficilkan argaggixisanimo.
Wuxuu ku eedeeyay Iran waqtigaas inay qarineyso oo ay balaarineyso hubkeeda Nukliyeerka si ogaadiya, asaga oo sheegay in sirdoonka Israel ay dalka ka heleen keyd nus tan ah oo ka mid ah qalabka keydka Nuclearka
Weerarka waxaa xaqiijiyay TV-ga dowlada Iran laakiin kadib waxaa beeniyay hay’adda tamarta Atomiga ee Iran (AEOI) ka hor inta aysan si gooni gooni u xaqiijin wasaarada difaaca. Sawirrada goobta la sheegay in la weeraray ayaa sidoo kale ka muuqatay bogagga wararka Iran. Ciidamada amaanka ayaa xirey wadada weyn ee weerarka uu ka dhacay.
Afhayeen u hadlay militariga Israa’iil ayaa yiri: “Kama faallooneyno warbixinnada warbaahinta shisheeye”. Xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in aysan ka hadli doonin “warbixinnadaas”.
Jahwareerka ka taagan warbaahinta Iiraan ayaa ka turjumaya xiisadaha sare ee ka jira gudaha Iiraan, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in sirdoonka Israa’iil iyo adeegga qarsoodiga ah la siiyay iftiinka cagaaran ee ay ku sii kordhin karaan weerarada lagu qaadayo xarumaha nukliyeerka ee Iran ka hor inta uusan Donald Trump istaagin xilka madaxweynaha.
Saraakiil badan oo reer Iran ah ayaa rumeysan in Trump, isaga oo la kaashanaya Israel iyo Saudi Arabia, ay ka go’an tahay inuu daciifiyo ama ka horyimaado Iran ka hor wareejinta Mareykanka ee xukunka 20 Janaayo.
Hossein Dehghan, oo ah lataliyaha sare ee militariga Khamenei, ayaa yiri isaga oo tixraacaya Trump: “Maalmihii ugu dambeeyay nolosha siyaasadeed ee xulafadooda khamaarka, Sahyuuniyadda waxay raadinayaan inay xoojiyaan oo ay kordhiyaan cadaadiska Iran si ay uqaado dagaal buuxa. Habeenku waa dheeryahay. Waxaan ugu soo dagi doonnaa sidii danab oo kale kuwii dilay shahiidkan la dulmiyay. ”
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Joe Biden, ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib uga mid noqdo heshiiskii Niyukleerka Iiraan iyo in laga qaado cunaqabateynta dhaqaale ee saaran illaa iyo inta Iiraan ay ku soo noqoneyso u hoggaansanaanta heshiiska, gaar ahaan keydka badan ee yuuraaniyamka ee ladan. Israel iyo Sacuudi Carabiya waxay rabaan in Mareykanku uu baaqi ku ahaado meel ka baxsan heshiiska isla markaana uu ku sii wado siyaasad cunaqabateyn dhaqaale oo ugu badnaan ah.
Fakhrizadeh, oo ku jira liiska cunaqabateynta Mareykanka, waxaa loo tixgeliyey inuu yahay ilaaliyaha ugu weyn ee aqoonta Iran ee barnaamijkeeda nukliyeerka. Jeneraal guuto ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka islaamka, ahna borofisar cilmiga fiisigiska ka ah jaamacadda ilaalada ee Imaam Xussein, waxaa loo xiray khafiif.
Ilaa Abriil 2018, lama helin sawirkiisa oo si cad loo heli karo, ka dib dilkii dhowr kale oo saynisyahanno nukliyeer ah, gaashaan dheeri ah oo qarsoodi ah iyo nabadgelyo ayaa lagu soo tuuray hareerahiisa, iyada oo la isku dayayo in laga ilaaliyo gacan ku dhiiglayaasha Israel.
Wuxuu la wareegay Xarunta Cilmi-baarista Fiisigiska ee Iran 1988, ka dibna wuxuu madax ka noqday cilmi-baarista dhaxal-sugeheeda, Mac-hadka Fisigiska Applied, oo ah meeshii laga waday barnaamijka cilmi-baarista nukliyeerka ee Iran.
Weligiis lama wareysanin xubin ka tirsan hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka ee IAEA, laakiin waxaa lagu magacaabay mid ka mid ah warbixintooda.
Previous articleIran’s top nuclear scientists were ‘murdered’, state media say
Next articleDEG DEG: Qarax xooggan oo goordhow ka dhacay Muqdisho iyo wararkii u dambeeyay…